कमाईको सुरुवातमै यी ९ मन्त्र अपनाए गरीब भइन्न ! – Taza Post
जब तपाईले जीवनमा पैसा कमाउन थाल्नुहुन्छ, त्यसबेलादेखि नै आर्थिक अनुशासन पालना गर्नुभएन भने तपाईले जीवनभर जति कमाए पनि बचाउन सक्नुहुन्न । बचत गर्न नसकेपछि तपाईले उर्जावान समयमा कमाएको पैसाले भविष्यमा काम गर्न सक्दैन ।
आफ्नो खर्चलाई आफ्नो आम्दानीको प्रतिशतको हिसाबले हेर्नुपर्छ । आदर्श अवस्थामा तपाईको कुल आम्दानीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुनुहुँदैन । यो प्रतिशत जति कम हुन्छ, त्यति बचत र
खर्चको मामलामा तपाईलाई सहुलियत प्राप्त हुन्छ । बाँकी प्रतिशत आम्दानीलाई बचतको रुपमा राख्ने बानी बसाल्नुपर्छ । यो प्रतिशतबाट कहिलेकाही सौख पूरा गर्ने खर्चको समेत जोहो गर्न सकिन्छ । यदि कुनै हप्ताको अन्ततिर तपाईलाई आफ्ना साथीभाईसँग मिठो खाना खान मन लाग्यो भने त्यसलाई पनि आफ्नो आम्दानीको प्रतिशतको रुपमै गणना गर्नुपर्छ । यसको गणना त्यतिबेला तपाईले राम्रो ढंगले गर्न सक्नुहुन्छ, जब यो धेरै बढी हुन्छ वा अफोर्डेबल हुन्छ ।
तपाई आफ्नो आम्दानीको वृद्धिदरमा सधैं फोकस बन्ने गर्नुहोस् । तपाईको जागिर यस्तो हुनुपर्छ, जहाँ तपाईको योगदानलाई सम्मान प्राप्त होस् र तपाईलाई उचित रिवार्ड मिलोस् । केही कमी भयो भने सबैभन्दा पहिला आफैंलाई राम्रो बनाउने कार्यमा लगानी गर्नुहोस् । तपाईको आम्दानीले नै तपाईको बित्तीय जीवन हराभरा बनाइदिन्छ । आफ्नो नियमित आम्दानीमा आँच आउन नदिनुहोस् । (source)
Previous २६ कम्पनीको बजार मूल्य एक बर्षयताकै अधिकतम, कुन कम्पनीको मूल्य कति प्रतिशतले बढ्यो?
Next गुराँस लघुवित्तको आईपिओ २३ हजार ३६३ आवेदकलाई बाँडफाँड